Izibonelo Ezi-6 Zendlela Amabhizinisi Akwazi Ngayo Ukukhula Ngesikhathi Sobhubhane | Martech Zone
Ekuqaleni kwalolu bhubhane, izinkampani eziningi zisika izabelomali zazo zokukhangisa nezokumaketha ngenxa yokwehla kwemali engenayo. Amanye amabhizinisi acabanga ukuthi ngenxa yokudilizwa kwabantu abaningi, amakhasimende azoyeka ukusebenzisa imali ngakho-ke kwehliswa isabelomali sokukhangisa nokukhangisa. Lezi zinkampani zizingele phansi ziphendula ubunzima bezomnotho.
Ngaphandle kwezinkampani ezingabaza ukuqhubeka noma ukwethula imikhankaso emisha yokukhangisa, iziteshi zethelevishini nezomsakazo nazo bezinenkinga yokuletha nokugcina amakhasimende. Ama-ejensi namafemu wokumaketha angasebenzisa leli thuba ukusiza zombili izinhlangothi ukuthi zinqobe ubunzima obubangelwa ubhadane. Njengoba iSilver Frog Marketing ibonile, lokhu kungaholela emkhankasweni wokukhangisa nokumaketha osize ukukhulisa amabhizinisi phakathi nobhadane. Nakhu ukuthi amabhizinisi akwazi kanjani ukukhula phakathi nobhadane, kanye nemikhuba yokugcina engqondweni ngenkathi kwakhiwa imikhankaso yokukhangisa ngemuva kobhadane.
Ngenkathi amabhizinisi ebuka amapayipi abo eba yiqhwa lapho kuhlasela lolu bhubhane, abaholi basebenze ukugcina nokukhulisa ubudlelwano kunokuncika kumathemba. Izinkampani eziningi zenze umnyakazo wokutshala imali enguqulweni yedijithali njengoba abasebenzi babo bengasebenzi ngokomthamo ngoba kunciphise umthelela ekusebenzeni jikelele. Ngokufuduka nokuzenzekelayo izinqubo zangaphakathi, izinkampani zikwazile ukushayela ngokusebenza kahle.
Ngaphandle, ukufuduka kwamapulatifomu aqinile kwavula amathuba wokunikeza isipiliyoni samakhasimende aphezulu futhi. Ukuqaliswa kohambo lwamakhasimende, ngokwesibonelo, kuqhuba ukuzibandakanya, inani, kanye namathuba we-upsell namakhasimende wamanje. Kokubili umthelela wangaphakathi nangaphandle ucindezele amadola amaningi futhi unikeze isisekelo sokuthengisa okuthuthukayo njengoba umnotho ubuya.
Xoxa On The End End
Eziteshini zethelevishini nezomsakazo, ubhadane lubange ukungaqiniseki ngenxa yokushintsha kwezabelomali zokukhangisa nezinkampani ezidonsa imikhankaso yazo yokukhangisa. Kwacaca ukuthi ama-ejensi neziteshi kumele zisebenzisane ukuze zisize ukufeza izidingo zazo. Ukusebenza ngokubambisana nesiteshi ukuxoxisana ngamanani entengo ngaphambili akumele kusizakale isiteshi kuphela, kepha kuzuzisa neklayenti lakho.
Ukuthola izinto ezinjengosayizi wababukeli kanye nemingcele ethile yokuthenga ukusungula izingxoxo ukuze uthole amanani aphansi awo wonke amaklayenti kuyinto engaba ukhiye kule mikhankaso. Uma wehlisa isilinganiso sakho, izindleko zakho ngempendulo ngayinye zizokwehla bese i-ROI yakho nenzuzo yakho izokwenyuka.
UChristina Ross, ongumsunguli we-Silver Frog Marketing
Ngokuxoxisana ngalezi zilinganiso ngaphambi kokukhuluma ngisho neklayenti, uvala amanani enkampani okungaba nzima ukuthi izimbangi ziwahlule. Esikhundleni sokuxoxisana ngokususelwa enkampanini ethize, ukuxoxisana ekugcineni kunganikeza amanani entengo angachemile esiteshini naseklayenti.
Inhlonipho Futhi Setha Izabelomali Ezingokoqobo
Ngesikhathi salo bhubhane, izinkampani zazingabaza ukubeka eceleni izabelomali ezinkulu ngenxa yokungaqiniseki nokungabaza ukuthi abathengi bazosebenzisa imali. Yingakho kubalulekile ukuthi izinkampani ziqhubeke nokubeka izabelomali ebezinethezekile futhi zibahloniphe njengoba umkhankaso wethula.
Njalo qala ngesabelomali onethezekile ngaso. Ungakwenza lokhu ngokuhlaziya amanani adlule, okuhlangenwe nakho, nokuthi yini okusebenzele wena nenkampani yakho. Ngokusetha lezi benchmarks, ungaba nokuqonda okucacile kokudingayo ukuze usebenzise imali engenayo.
Lokhu kuqonda nokubamba izingxoxo eziqotho namakhasimende ngesikhathi sobhadane kuholela empumelelweni enkulu. Ngokucwaninga idatha yemakethe, ukuhlala phezulu kwamanani kanye neziteshi zokubamba ukuphendula ngezikhathi zazo zokugijima ukuthola amakhredithi, izinkampani zingasungula izinzuzo ezinkulu zamakhasimende azo.
Yiba Nesheduli Evumelana Nezimo
Ubhadane lube nzima kakhulu ukuhamba ngoba luyinto engalindelekile. Asinakuqonda ngomthelela omkhulu noma umkhondo wobhadane ngoba nje asikaze sizulazule kulokhu ngaphambili. Ngalesi sikhathi, kubalulekile ukuthi imikhankaso yokukhangisa ihlale iguquguqukayo.
Amakhasimende abhukha kuphela amasonto amabili, noma inyanga, ngesikhathi esivumela ukuguquguquka okuhle. Lokhu kuvumela ama-ejensi ukuthi ahlaziye izinombolo futhi anqume ukuthi yiziphi izimakethe, iziteshi, kanye no-dayparts okungcono nokuthi imiphi imikhankaso eshayayo ukuze ukwazi ukugxila kwabenza kahle kakhulu kunokumosha imali yekhasimende lakho.
Lokhu kuvumelana nezimo kuvumela izinkampani nama-ejensi ukuthi aqhubeke njalo enza imikhankaso yawo yokufeza i-ROI ephakeme. Njengoba izindawo ezithinteke kakhulu ziqhubeka nokushintsha futhi nemingcele kahulumeni ikhululeke maqondana nokuvulwa kabusha, okuvumela umkhankaso wakho ukuthi ube nokuguquguquka okungaguquki kwenza ukuthi idola lakho lokukhangisa ligingqike ngezibhakela ezingalindelekile esibhekene nazo njengamanje. Eminye imikhankaso emile futhi ende izomosha amadola wokukhangisa futhi iholele ekuphenduleni okuphansi ngezindleko eziphakeme ngocingo ngalunye.
Izikhala Zasemini Eqondisiwe
Ngesikhathi kubhebhetheka lesi sifo, abanye abathengi babedilizwa emsebenzini kanti abanye babesebenza emakhaya.
Kwesinye isikhathi amakhasimende ethu aveza ukukhathazeka okuncane mayelana nokusakazwa phakathi nosuku ngenxa yomcabango oyiphutha wokuthi bonke abantu ababuka i-TV emini abasebenzi. Lokho bekuyiqiniso elingelona iqiniso, ngisho nangaphambi kokuba kube khona ubhadane, kodwa manje sekukuncane kakhulu ngabantu abaningi kangaka abasebenza emakhaya. ”
USteve Ross, ongumsunguli we-Silver Frog Marketing
Njengoba abantu abaningi bebuka ithelevishini futhi belalela umsakazo, izindleko zamanani ezingcingo ziyehla. Abantu abaningi bebesekhaya okusho ukuthi abantu abaningi bebebona izikhangiso zomkhiqizo futhi bengena.
Kubalulekile ukusizakala ngalezi zinhlaka ngoba izethameli ziyaqhubeka nokushintsha. Ngokuthinta lezi zilaleli ezintsha, umkhiqizo wakho uzobekwa phambi kwabantu abaningi abakwaziyo ukutshala imali. Futhi kuvumela ukufinyelela kulabo okungenzeka ungakwazi ukufinyelela ngaphambi kwalo bhubhane ngenxa yamashejuli omatasa omsebenzi nokubukwa okuphansi okuvela kubantu abathile.
Thuthukisa Amaqhinga Akhethekile Okukala
Lapho abathengi bephendula imikhankaso yokukhangisa, ukumane ubuze ukuthi babone kuphi isikhangiso kungaba isenzo esiyingozi. Lokhu kungenxa yokuthi isikhathi esiningi, umthengi ugxila kakhulu kumkhiqizo kangangokuba angakhumbuli ukuthi wawubone kuphi. Lokhu kungaholela ekubikeni okukhohlisayo kungelona iphutha lekhasimende.
Ukusiza ukukala izikhangiso, kungcono ukusebenzisa inombolo eyi-800 kuyo yonke intengiso. Ungawaxhuma futhi wenze lezi zinombolo zihleleke ziye esikhungweni sokushaya esifanayo ukuze iklayenti lakho libe lula. Ngokunikeza inombolo eyiqiniso yesikhangiso ngasinye, ungalandelela ukuthi izingcingo zivelaphi futhi ukhiqize imibiko enembile. Ngale ndlela, wazi kahle ukuthi yiziphi iziteshi ezizuzisa iklayenti lakho kakhulu ukuze uqhubeke nokunciphisa imithombo ephumelelayo yemali nokwakha i-ROI.
Lezi zinombolo zingaba wusizo lapho uqonda ukuthi iziphi iziteshi nezimakethe zomkhankaso wakho okufanele ziqhubeke nokukhomba. Ngokungabi nezilinganiso ezinembile zokuphendula, akunakulimaza umkhankaso wakho kuphela, kepha futhi kungalimaza isabelomali sakho sokukhangisa.
Ngesikhathi iSilver Frog Marketing ibhekene nabamabhizinisi abaningi ababengazi ukuthi bazosinda kulo bhubhane, baqhubeka nemizamo yokukhiqiza impumelelo yabo yangaphambilini. Kusuka kwizabelomali ezikhulayo zamakhasimende ezingama-500%, kuya ekunciphiseni kwezindleko zamakhasimende ngempendulo ngayinye ngama-66%, zinike amandla amabhizinisi ukukhuphula imali futhi abuye ekutshalweni ngesikhathi sokuphakama kwesifo; konke ngenkathi besebenzisa imali encane kunalokho ababekujwayele.
Njengamanje, kubalulekile ukuthi izinkampani ziqhubeke nokukhangisa ukuze zibuyiselwe kunoma yikuphi ukulahleka futhi ziqhubeke zikhula.
Uma wena noma inkampani yakho nithanda ukufunda kabanzi ngamathiphu namasu wokuthuthukisa imikhankaso yokukhangisa ngesikhathi sobhadane, vakashela i- Isimemezelo Seselesele Iwebhusayithi.
Tags: khangisaibhajethiukukhula kwebhizinisii-coronavirusukuguqulwa kwedijithaliumnothouhlelo olushintshashintshayoubhubhaneisabelomali sokuthengisaukulinganiswa kokuthengisaukuxoxisana ngokuthengisauhlelo lokuthengisakhomba izikhala zasemini
May 6, 2021 ku-5: 46 AM
Ubhadane lushaye kakhulu ibhizinisi. Kepha labo abakwazile ukuzivumelanisa nezimo ezintsha bamelana nakho. Kuyathakazelisa futhi kuyafundisa. Ngiyabonga!